Sqirlz Morph Isikhokelo. Indlela yokwenza moph ubuso bakho | Iindaba zeGajethi
Hkudala ndathembisa ukuba ndizokwenza incwadi yokufunda indlela yokusebenzisa uSqirlz Morph. Le nkqubo isetyenziselwa ukwenza i-morphing, kwabo bangaziyo ukuba kuthetha ntoni oku ndishiya le nkcazo ilandelayo yoku morphing:
El imo Yindlela apho uguquko lomfanekiso lube lolwahlukileyo lwenzeka ngokulandela amanye amanqaku embalelwano okanye ulawulo. Inani lala manqaku olawulo, kunye nempumelelo yawo ekuzibekeni, ziya kuthi ikakhulu zichonge umgangatho wotshintsho lokugqibela.
BEwe ngoku uyazi ukuba yintoni i-morphing, ukuba ufuna ukwazi ukuba yintoni uSqirlz Morph anakho, ungayibukela ividiyo ZapaJoker yenziwe ngale nkqubo.
CKwi-Sqirlz Morph uya kuba nakho ukwenza utshintsho oluninzi phakathi kwemifanekiso eliqela, ayikhawulelwanga kwimvelaphi yomfanekiso kunye nomfanekiso wokugqibela, kodwa ungongeza eminye imifanekiso ephakathi ukwenza utshintsho lwakho lube mnandi ngakumbi. Ungagcina iziphumo njengefayile yevidiyo ye-AVI, njengomzobo we-GIF, okanye kwifomathi yeMacromedia Flash SWF. Ungagcina imifanekiso nganye nganye kwifomathi yeJPEG okanye ye-BMP (bitmap okanye bitmap). Ukongeza, i-Sqirlz Morph iyahambelana nazo zonke iifestile ukusuka kwi-95 ukuya kwi-Vista kwaye ngokupheleleyo simahla, ngaphandle kwemida okanye ixesha lokulingwa, siya kuyenza ngobuso ebusweni (ebusweni).
BEwe, ukuba ividiyo kunye neenkqubo zenkqubo zikuqinisekisile, masibone indlela yokufaka uSqirlz Morph.
-Ukufakwa kwe-Sqirlz Morph-
Dkhuphela inkqubo kwi ISoftonic okanye ndwendwela Sqirlz Morph iphepha elisemthethweni. Okwangoku ingxelo ngu-1.4 kwaye le khokelo isekwe kuyo.
CXa unayo ifayile kwi-hard drive yakho, vula iziphu njengoko iza kwifomathi ye-ZIP. Emva koko cofa kabini kwifayile ephunyeziweyo kwaye ulandele oku kulandelelana:
«Elandelayo>» >> «Elandelayo>» >> «Elandelayo>» >> «Faka» >> «Gqiba»
YUnenkqubo efakiweyo ngoku siza kubona uphononongo ngokubanzi lwendawo yokusebenza yeSqirlz Morph.
-Sqirlz Morph Indawo yokusebenzela -
PUkuvula inkqubo landela le ndlela ilandelayo:
«Qala» >> «Zonke iiNkqubo» >> «Sqirlz Morph» >> «Sqirlz Morph»
Skwaye isikrini esilandelayo siza kuvula:
Kule festile siyakwazi ukwahlula imimandla emihlanu. Eyokuqala, njengoko sibona kumfanekiso ongentla, yindawo yokusebenza kwaye ihlala kwindawo esembindini wesikrini.
Emva koko sinemenyu yemenyu, phezulu.
Apha ngezantsi nje kwemenyu yemenyu sinesixhobo ngokubanzi (Ibar yesixhobo (Ngokubanzi)).
Ekhohlo kwefestile yiBar yeSixhobo (Indawo yoLawulo).
Ibar yendawo engatshintshiyo ibonakala emazantsi.
Kwaye okokugqibela, ngaphezulu nje kwebar yomgangatho yiBar yeSixhobo (Khetha isakhelo).
Sele sinesishwankathelo sendawo yethu yokusebenza, ngoku siza kubona ukuba uSqirlz Morph usetyenziswa njani.
-Sqirlz Morph usebenza njani? -
ELe nkqubo kulula kakhulu ukuyisebenzisa kwaye ngoku uya kuyibona. Ukwenza utshintsho, umzekelo ukusuka kobunye ubuso ukuya kobunye ubuso, sidinga oku kulandelayo:
Imifanekiso emibini: Sijonge iifoto ezimbini, njengakulo mzekelo siza kwenza inguquko ukusuka kobunye ubuso ukuya kobunye, kuya kufuneka sikhangele imifanekiso emibini yobuso. Kuyinto enqwenelekayo ukuba iifoto zinokufana ngokwembala kunye nokuma kobuso. Makhe ndichaze, ukuba iifoto ezimbini zinemibala efanayo yemvelaphi, utshintsho ukusuka kobunye ubuso luye kolunye luya kuhlala luhambelana, kwelinye icala, ukuba sithatha iifoto ezimbini, enye inomlingiswa kwiprofayile kwaye enye inomnye umlinganiswa ngaphambili, inguquko ayizukuba manzi kangako. Kungenxa yoko le nto kucetyiswa ukuba usebenzise iifoto ezimbini apho abalinganiswa babonisa ukwenziwa okufanayo, nangona kunganyanzelekanga kwaphela.
Beka indawo yolawuloXa sisenza utshintsho siza kuba nomfanekiso-ngqangi kunye nomfanekiso oya kuyo. Unokusebenzisa imifanekiso emininzi okanye ubuyisele umva kwicala lotshintsho, umfanekiso ongumthombo ungowomfanekiso ekuyiwa kuwo kwaye kungenjalo, kodwa okwangoku siza kuhlala kunye nenketho elula, eyimvelaphi yomfanekiso kunye nomfanekiso oya kuyo. Into ekufuneka siyenzile kukubeka indawo yolawulo kumfanekiso womthombo ophawula iindawo ezahlukeneyo zobuso bomlinganiswa oza kuguqulwa. Amanqaku sibeka, kokukhona morphing yethu iya kuba nzima.
Hambisa amanqaku olawulo kumfanekiso ojolise kuwo: Njengoko sibeka indawo yolawulo kumfanekiso womthombo, la manqaku avela kumfanekiso oya kuyo, kodwa kunqabile ukuba abonakale kwindawo elungileyo, kungoko kufuneka sizishukumisele ukuba zenze ukuba zingqinelane neenxalenye zobuso eziphawule ulawulo lwamanqaku umfanekiso ongumthombo. Ngoku siza kubona ngokweenkcukacha ezingaphezulu ukuba oku akukho bunzima.
-Usebenzisa uSqirlz Morph. Ukuseta kwasekuqaleni -
Bngoku ngoku siyayazi into esiyifunayo masiqale ngotshintsho ngokulandela amanyathelo adweliswe apha ngasentla:
1) Sijonge iifoto ezimbini esiza kwenza ngazo i-morphing, kuba oku ungathatha umfanekiso owuthathe ngekhamera yakho okanye oyisebenzisileyo Imifanekiso kaGoogle. Ndizakwenza utshintsho olulula phakathi Kofi Annan y Morgan Freeman kwaye ndikhethe ezi foto zimbini ukwenza i-morphing.
Ngoku siza kungenisa iifoto ezimbini kwinkqubo. Vula i-Sqirlz Morph kwaye ucofe ku "Fayile" kwimenyu yebar. Emva koko ucofe ku "Vula" fumana imifanekiso emibini kwi-hard drive yakho kwaye ukhethe. Okokugqibela nqakraza ku «Vula». Imifanekiso emibini ekhethiweyo iya kuvela kwiwindow yenkqubo, enye ingaphezulu kwenye. Tsala umfanekiso ojolise ekunene kwaye ushiye indawo yokusebenza ngolu hlobo:
Umfanekiso obonakala embindini wobuso bobabini yiwindows «Preview» apho unokubona ukuba utshintsho luya kujongeka njani njengoko usongeza amanqaku.
Ngaphambi kokuqhubeka siza kugcina into esiyenzileyo kwiprojekthi, ukwenza oku, cofa kwi «Ifayile» kwaye emva koko «Iprojekthi» kunye «Gcina njenge». Iwindow ethi "Gcina njenge" iya kuvula apho kuya kufuneka unike igama leprojekthi. Khetha igama kwaye ucofe ku "Gcina". Ukusukela ngoku ukuya phambili, nanini na usenza inkqubela phambili ebonakalayo emsebenzini wakho, kuya kufuneka ubagcine ukuze ungaphulukani notshintsho kwimeko yokumka kombane okanye xa ufuna ukuyeka ukusebenza ukuze uqhubeke kamva.
2) Ukuba uyigcinile iprojekthi kwaye wayivala inkqubo ukuze uqhubeke nesifundo kufuneka siyivule iprojekthi. Cofa kwi "Fayile" kwimenyu yebar kwaye emva koko kwi "Projekthi" kunye "Vula". Ifestile "evulekileyo" iya kuvula apho kufuneka ukhangele khona iprojekthi egciniweyo.Ukuba uyikhethile, cofa ku "Vula" kwaye siqhubeke apho besishiye khona.
3) Utshintsho phakathi kobuso bobabini lunokwenziwa kumacala omabini, njengoko ndifuna ukuyenza kunye nefoto ngasekhohlo njengemvelaphi yokuphamba, kuya kufuneka ndiyilungiselele inkqubo yokwenza njalo. Ukwenza oku, cofa ku «Imifanekiso» kwimenyu yebar kwaye emva koko ucofe ku- «Umyalelo woopopayi», iwindow ethi «I-animation Image Order» iya kuvela.
Umfanekiso ovela kuqala kuluhlu uya kuba ngumthombo wenguqu, kule meko umfanekiso kaFreeman uyavela kwaye asizukutshintsha. Ukuba kuye kwafuneka sitshintshe iodolo kuya kufuneka sikhethe umfanekiso weKofi kuphela kwaye ucofe kumaqhosha asekhohlo efestileni ukuyilayisha.
4) Ukuze inguqu ibe yimpumelelo, le mifanekiso mibini kufuneka ibe nobukhulu obulinganayo. Ukufezekisa oku sinokuhlengahlengisa ubungakanani bemifanekiso kwinkqubo enye, kufuneka ukhethe enye yeefoto ezimbini ngokunqakraza kwenye yazo kwaye ucofe ku "Mfanekiso" kwibar yemenyu, kwimenyu evula ucofa Cofa ku "Linganisa ubungakanani" kwaye iwindow iya kuvulwa apho iya kukubuza ngesiNgesi ukuba uqinisekile ukuba ufuna ukunyenyisa ubungakanani beminye imifanekiso kubungakanani bomfanekiso okhethiweyo. Cofa ku "Ewe" kwaye yonke imifanekiso ekwiprojekthi iya kuba silingane.
5) Ngoku siza kuguqula elinye ixabiso lenkqubo emiselwe ukuba ibe ngu "20" kwaye lelo linani lezakhelo ezenza utshintsho. Ukuyitshintsha siza kucofa ku «Morph» kwimenyu yebar kwaye emva kwexesha «Ixesha». Iwindows «Ixesha loPhiliso» iya kuvula apho siza kuseta khona ixabiso libe ngama-50. Ngale ndlela, utshintsho luya kuba nezakhelo ezingama-48 eziphakathi phakathi komthombo kunye nomfanekiso wokugqibela.
Emva kokuhlengahlengisa ixabiso liye kuma-50, cofa ku- «Kulungile» kwaye ujonge kwibar yesixhobo ekukhetheni isakhelo elitshintshe ixabiso ukusuka kuma-20 ukuya kwangama-50.
Ukuphakama kwenani lezakhelo, kokukhona kuhamba kancinci kutshintsho. Ixabiso lama-20 liya kuvelisa utshintsho olukhawulezileyo oluya kubangela ukuba utshintsho phakathi kobuso luxatyiswe kakubi, nangona kuxhomekeke kwiimeko onokuthi unomdla wokulihlisa eli xabiso.
Sebenzisa uSqirlz Morph. Ukuqalisa inguqu -
BEwe, emva kokumisela iiparameter zangaphambili, masingene ngokupheleleyo kwinkqubo yokuguqula ubuso obubini.
1) Into yokuqala kukukhetha isixhobo ukongeza amanqaku olawulo («Yongeza indawo yolawulo») ekwi bar yesixhobo yeendawo zolawulo kwaye emelwe ngumnqamlezo oluhlaza. Nje ukuba sikhethe, siya kumthombo womfanekiso (kule meko, kaFreeman) kwaye siqale ukongeza iindawo zolawulo kwiindawo ekubhekiswa kuzo ezinje ngamehlo, impumlo, umlomo, iindlebe, njl.
Qaphela ukuba amanqaku olawulo abekwe njani ezindlebeni nasemehlweni, esilevini, emlonyeni, empumlweni, kumda weenwele nakwezinye ebunzi. Ngoku jonga amanqaku aphawulwe njengo-1, 2 no-3 kwaye uza kubona ukuba kumfanekiso kaKofi inqaku livelile njani kwindawo nganye yolawulo eyongezwe kumfanekiso kaFreeman, kodwa la manqaku kumfanekiso ekujoliswe kuwo ahambelani ngqo neendawo eziphawuliweyo. umfanekiso ongumthombo.
2) Kuya kufuneka senze indawo nganye yolawulo lomfanekiso uhambelane neendawo ezifanayo kumfanekiso wokuya, oko kukuthi, ukuba indawo yolawulo iphawula iziko lomfundi wefoto kaFreeman, into ekufuneka siyenzile kukuhambisa inqaku elihambelana neKofi's ifoto. Ukwenza oku siza kukhetha isixhobo sokuhambisa indawo yolawulo engaphantsi komnqamlezo oluhlaza kwaye enotolo olumnyama olucekeceke njenge icon. Ngesixhobo esikhethiweyo siya kuya kumfanekiso oya kuyo kwaye sihambise amanqaku ngamanye ade abe kwindawo efanelekileyo. Ukwazi ukuba uhambisa inqaku elifanelekileyo, qaphela ukuba ngalo lonke ixesha ukhetha enye kumfanekiso wokuya, kumfanekiso womthombo inqaku liya kubonakala lijikelezwe sisangqa.
Hambisa onke amanqaku kumfanekiso ojolise kuwo de ube umfanekiso ubonakala ngolu hlobo:
Njengoko ubona, siye senza amanqaku wamehlo ahambelana ukuze baphawule abafundi kunye nekona yamehlo, amanye amanqaku ahanjisiwe de ahambelane neendawo zokuqala. Kuya kufuneka uqaphele ukuba njengoko usongeza kwaye ubeka ngokuchanekileyo amanqaku olawulo, umfanekiso kwi «Ukujonga kuqala» utshintsho lwefestile, ekunika umbono wokuba indlela yokuziphatha iya kuba njani.
3) Yongeza amanqaku amaninzi olawulo njengoko ucinga kufanelekile kwaye xa ufuna ukubona iziphumo ucofe kwiqhosha "Morph / Warp" elibekwe kwi-toolbar ngokubanzi. I icon yeli qhosha lutolo olutyheli olukhombe ngasekunene. Emva kokucofa kwiqhosha uza kubona kwiwindows «Preview» ukuba i-morphing yenziwa njani. Ukuba ufuna ukubona ukuba lukhona njani utshintsho phakathi kukaFreeman noKofi, cofa apha.
4) Xa wanelisekile ngumsebenzi wakho, kuya kufuneka uthathe isigqibo sokuba yeyiphi ifomathi ofuna ukuyigcina. Unokukhetha ukuyigcina njenge-animated gif, njengemovie yefilimu okanye njengevidiyo enokongezwa .avi, xa uthatha isigqibo, cofa kwi icon ehambelana nayo kwizixhobo ngokubanzi.
Masibone ukuba inkqubo yokudala oopopayi ixhomekeke njani kwifomathi yemveliso ekhethiweyo.
Gcina njengeflashCofa kwi icon ehambelana nayo kwaye i "Gcina njenge" iwindow iya kuvula apho kuya kufuneka unike oopopayi bakho igama. Xa uyisetile, cofa ku "Gcina" kwaye ifayile iya kugcinwa kunye nefleshi ".swf" eyandisiweyo, kodwa kuqala ifestile ebizwa ngokuba yi "Flash Movie Parameters" eya kuvula apho kufuneka ukhethe "ireyithi yeSakhelo" phakathi ko-1 kunye ne-100, yishiye ngo-15 kwaye ugcine engqondweni ukuba eli xabiso liphezulu, ngokukhawuleza inguqu iya kuba. Umzekelo, i-morphing yethu ineefreyimu ezingama-50, ukuba sikhetha inqanaba lesakhelo sama-25 utshintsho oluza kwenzeka kwimizuzwana emi-2. Shiya "Umbala wemvelaphi ezenzekelayo" ujongiwe ukuze uvelise ngokuzenzekelayo umbala ongasemva xa kukho imfuneko kwaye ekugqibeleni kwibar engezantsi ungakhetha umgangatho wokugqibela wemifanekiso ngokuhambisa ibar ukusuka ekunene uye ekhohlo (phezulu ukuya kumgangatho osezantsi). Ixabiso elingagqibekanga (60) libonelela ngeziphumo ezamkelekileyo kunye nefayile engasindi (ithatha iimegabytes ezimbalwa). Xa unento yonke emiselweyo, cofa ku "Kulungile" kwaye oopopayi baya kuqala ukwenziwa.
Gcina njenge-avi: Ukugcina njengemovie ngokwandiswa .avi, kufuneka ucofe nje kwi icon ehambelana nayo. Iwindow ethi "Gcina njenge" iya kuvulwa, apho kuya kufuneka ufake igama kwaye ucofe ku "Gcina". Emva koko iwindow ye- "AVI Frame Rate" iya kuvela apho kuya kufuneka ukhethe inani lemifanekiso ngomzuzwana, yishiye ili-15, njengakwifomathi yefleshi, kokukhona inyuka le nombolo, inyusa isantya apho kuguqulwa khona. Okokugqibela nqakraza ku «Kulungile» kwaye i «Ucinezelo lwevidiyo» iwindow iya kuvula.Lapha kuya kufuneka ukhethe ikhompressor yevidiyo ofuna ukuyisebenzisa kwaye eya kuxhomekeka codec ozifakileyo kwikhompyuter yakho. Ukhetho olufanelekileyo kukukhetha i "TechSmith Screen Capture Codec" njengecompressor, eza ngokungagqibekanga kwinkqubo kwaye idale ifayile engasindi. Xa uyikhethile, cofa ku "Kulungile" kwaye ukudalwa kwevidiyo yakho kuya kuqala.
Gcina njenge-GIF: Ukuba sifuna ukugcina inguqu njengefayile yemifanekiso yoopopayi (GIF) siza kucofa kwiqhosha elihambelanayo kwaye «Gcina njenge» iwindow iya kuvula. Emva kokunika igama kutshintsho lwethu, siza kucofa ku «Gcina» kunye «nereyithi yesakhelo (iFayile yeGIF)» iwindow iya kuvela, ushiye ixabiso elingagqibekanga (15) kwaye ucofe ku «Kulungile». Uyilo lwefayile yeGIF luya kuqala.
Dfter ngokugcina umsebenzi wakho nakweyiphi na ifomathi yangaphambili, ugqibile ukutshintsha kwakho. Ngoku ndicebisa ukuba ugcine iprojekthi yakho, uyazi, ukuba kunokwenzeka uthathe isigqibo songeze amanqaku olawulo ukuphucula inguqu. Into esiyenzileyo lutshintsho olulula ngamanqaku olawulo ambalwa, kodwa le nkqubo ivumela utshintsho olunomtsalane ngokwenyani.
DNdishiyela isifundo esilandelayo esiphambili ngakumbi sezinto ezilindileyo ezinje ngenguqu phakathi kobuso obungaphezulu kobabini, ukongezwa kwesakhelo ekuqaleni nasekupheleni kwenguqu, njl. Ukuba unomdla kumxholo weMorphing, ungathandabuzi ukutyelela eli candelo linegama elifanayo apha Vinagre Asesino blog. Ndiyathemba ukuba oku kube luncedo kuwe Sqirlz Morph inyathelo ngenyathelo lesifundo kwaye ungathandabuzi ukushiya uluvo lwakho. Imibuliso yeVinegary.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Sqirlz Morph Isikhokelo. Indlela yokwenza moph ubuso bakho
Molo Vinegar, enkosi kakhulu kwesi sifundo simangalisayo, bendifuna ukufunda indlela yokusebenzisa inkqubo ye-morphing ixesha elide kwaye bendicinga ukuba kunzima ngakumbi. Ndiyathemba ukuba uyaqhubeka ulayisha izinto ezininzi ze morphin.
Wamkelekile UMorpheo uyabona ukuba morphing ayinzima kangako. Ukubulisa.
Enkosi kakhulu ngokubhala konke oku!
Inyani yile yokuba indicacisile kakhulu.
Wamkelekile, mhlekazi. Konke okugqibelele.
nzulu ... undisindisile! I have k make video for a graphic subject where the drawings are transformed and I had no idea to do it ...
K YOKUQALA sitsho
Molo, andinamathandabuzo malunga notshintsho olungaphezulu kwemifanekiso emi-2, andisekho ekuphumezeni iziphumo ezinqwenelekayo ngabangaphezulu kwababini.
Phendula K DE KAY
Kunzima.K DE KAY kuya kufuneka ubeke amanqaku kwasekuqaleni kunye nemifanekiso emithathu.
NDIYABULELA KAKHULU !!!
NGOKU Masiqalise ukusebenza
Kulungile, le nkqubo ibikwincwadi yam yokuzoba.
Ingabonakala inzima, kodwa nje ukuba ufumane ukuxhoma kube lula. Iluncedo kakhulu kwiimpawu ze-msn
EZIZODWA !!! Ndihlomla ukuba lixesha lokuqala ukuba ndifunde isifundo kwiwebhusayithi yakho, ndivela eArgentina kwaye inyani kukuba isifundo besibonakala sihle kakhulu kwaye ngaphezulu kwako konke kuchanekile, (ngakumbi i-clumsy) hehe ...
Ukuhamba ngobubele kwaye ngokulula: ENKOSI KAKHULU !!! kubo bonke abafaka izicelo ...
Lucas ndiyavuya uyayithanda, wamkelekile kuMbulali weViniga.
Ndinengxaki… ..esantya ezihamba ngazo iifoto sigqithile… Ingaba kukho ulawulo lokunciphisa isantya?
Kuyamangalisa ukuba kukho abantu abapholile njengawe .. ..muxisisisisimas acias you are super cool !!!!
Ndifunde nje le nkqubo yenguqu ebusweni.
Ngaba usipapashile icandelo lesi-2 esithembisiweyo?
I-PS: nceda uxelele uCari ukuba angabulali ulwimi, kubhaliwe kwathiwa "kulungile", hayi "wena", "enkosi" hayi "enkosi", kunye no-k no-x banezinye iinjongo.
Ndiyathemba ukuba xa sele engumfazi uyakuqonda ukubulala akwenzayo.
I-Buenos Aires, ngoJulayi 17, 2009.
Ndinengxaki: Ndenza i-morphing ngemifanekiso emi-3, ndisebenzisa amanqaku amaninzi kwaye i-morphing ijongeka intle kakhulu kodwa ukusuka kumfanekiso woku-1 ukuya kumfanekiso wesi-2 inguqu iyaphumelela, emva kweyesi-2 yenza ukubuyela umva kwi-1 ekugqibeleni ukuwela kuyo umfanekiso we-3. XNUMX ke ayindifanelanga kakuhle ukuba ungandinceda ndiza kuyazi indlela yokubulela ... kwangethuba enkosi
Molo, bendifuna ukukubulela ngoqeqesho lwakho, kuba lundincedile ukuba ndiqonde ngcono le ndlela ye-morph. Okwangoku ndenze eyam, apho ndiphume ndanxiba swimsuit ndaza ndaba ngomnye umfana oziphethe kakubi.
Uqeqesho lwakho luyimpumelelo
Umntu onjalo uyaxatyiswa
Enkosi iviniga, uyichaze kakuhle, kodwa ndinamathandabuzo, ngokungathi ndifuna ukuyithumela ngeposi ... ndiza kuyigcina kweyiphi ifomathi, "enkosi" andazi ukuba Ndizokuyiphendula
Phendula kwi-boop betop
Enkosi ngesifundo, ndifuna nje ukuba loluphi uhlobo lwefayile endinokuyisebenzisa ukubhloga iMorph.
Molo ukusukela ngoku, enkosi kakhulu, inkcazo yakho intle kwaye icacile, kodwa ndinamathandabuzo ... Sele ndenze utshintsho kunye neefoto ze-4 kwaye i-wmm ayindivumeli ukuba ndisebenzise kule vidiyo ndiyenzayo ndiyigcinileyo. kwifomathi ye-avi kwaye andinakuyibona kuyo nayiphi na inkqubo endinayo. Ndingavuya ukuba uyandiphendula, enkosi kwangaphambili ukuba aniphenduli
Uyaphambana, iinkcazo zicacile, yaphuma yasebukhosini ngendlela enye !!!
Ngoku andazi ukuba ndiyenza njani ngeefoto ezininzi, ngaba kukho ukuqhubeka ????
Ndiphendula uBetty Boop ... ndiyigcinile njenge-gif emva koko ndayisika ndaza ndayikopa ngeposi kwaye yiyo ke ... njengoko iyi-gif ungayilayisha ngokukopisha kunye nokuncamathisela kodwa iphuma kwishumi Ndiyathemba ukuba iyanceda ...
IFEDERICO NABO GORDO sitsho
Ndingayifumana phi into oyithethayo eposini?:
«Ndishiya ikamva lesifundo esiphambili ngakumbi izinto ezilindelekileyo ezinje ngenguqu phakathi kobuso obungaphezulu kobabini, ukongezwa kwesakhelo ekuqaleni nasekupheleni kwenguqu, njl.
P.S. Isifundo silungile, ndiyilandele inyathelo ngenyathelo kwaye yonke into iphume ngokugqibeleleyo.
Phendula FEDERICO NABO GORDO
Ndinqwenela ukuba ungandixelela ukuba ngawaphi amanyathelo onokuwathatha endaweni yeefoto zevidiyo. Ukuze inkqubo ithathe ifoto ukusuka kobunye ubuso ukuya kwenye ngenyathelo ngalinye. Enkosi